Obodo ochie nke Spain: Site Santillana del Mar ruo Montefrío | Njem akụkọ
Louis Martinez | 30/04/2022 19:15 | España, Nduzi
E nwere ọtụtụ narị obodo ochie na Spain. Ha bụ obodo ndị o yiri ka ọ̀ akwụsịla, na mgbe anyị letara ha, na-ebuga anyị n’oge ochie ha ma ọ bụ dike ha nọ na ya. manors, oke ókè ma ọ bụ nnukwu ebe akụ na ụba.
Ịgagharị n'okporo ụzọ ya dị warara, ịhụ ụlọ ndị nna nna ya na ileta ihe ncheta ya mara mma na-eme ka ọ dị anyị ka ndị mmadụ si na Middle Ages. Na ihe kacha mma bụ na ị nwere ike ịhụ ha na ógbè niile nke Spainsite na Barcelona elu Caceres ma site na Cantabria elu Málaga. Maka ihe ndị a niile, anyị na-atụ aro ka ị gaa njem nke obodo ndị mara mma na Spain.
1 Santillana del Mar, a kpochapụwo n'etiti obodo ochie nke Spain
2 Besalú, ọmarịcha ihe nketa Romanesque
3 Aínsa, na Huesca Pyrenees
4 Frías, obodo ochie na Burgos
5 Albarracín, obodo ọzọ mara mma na Spain mgbe ochie
6 Montefrío, Andalusian mgbe ochie
Santillana del Mar, a kpochapụwo n'etiti obodo ochie nke Spain
Santillana del Mar, ikekwe obodo kacha ochie na Spain
Anyị na-amalite njem njem anyị n'obodo a kacha mara amara n'oge ochie na mba anyị. Ọ bụrụ na a jụrụ onye ọ bụla n'ime anyị banyere otu obodo ochie na Spain, ọtụtụ n'ime anyị ga-aza Santillana del Mar.
N'ihi na, ke adianade do, ọ bụ a mara mma Villa na obi nke Cantabria. Ọ bụghị n'efu, ọ na-ejide udi nke nka akụkọ ihe mere eme ensemble na bụ akụkụ nke netwọk nke Obodo Kachasị Mara Mma na Spain. N'ezie, anyị nwere ike ịgwa gị na obodo a abụghị ihe efu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ya niile nwere ihe na-adọrọ mmasị.
Mana enwere ọtụtụ ndị ị ga-ahụ. Ọ bụ ikpe mara mma Collegiate Church nke Santa Juliana, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na-esochi canons Romanesque, n'agbanyeghị na e wughachiri ya na XNUMXth. Jide n'aka na ị ga-aga leta ụlọ mwụda ya, ya na isi iri anọ na abụọ. Ọ dịkwa mkpa ka ị hụ ihe na-amanye ulo eze nke aja, ihe ịchọ mma nke Renaissance oge ochie nke nwere ihe oyiyi plateresque.
Ọ bụghị naanị ụlọ ọdịnala ị nwere ike ịhụ na Santillana. Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa n'obí Viveda, Mijares ma ọ bụ Valdivieso, yana ụlọ nke ụlọ ahụ. Ụlọ Nzukọ Alaeze, ụdị baroque. Na nkenke, dị ka anyị na-ekwu, ụlọ niile dị na obodo Cantabrian nwere mmasị. Nyere enweghị ike ịgwa gị banyere onye ọ bụla n'ime ha, anyị ga-adụ ọdụ ka ị hụkwa ụlọ nke Quevedo na Cossío, Villa, Archduchess ma ọ bụ ụlọ elu nke don Beltrán de la Cueva, del Merino na don Borja. Ihe a niile na-echefughị Ụlọ ihe ngosi nka nke Altamira, nke nwere ihe atụ nke ọgba ndị a ma ama.
Besalú, ọmarịcha ihe nketa Romanesque
Echiche nke Besalu
Anyị na-eme njem ugbu a na mpaghara La Garrocha, n'ógbè nke Girona, ịgwa gị banyere Besalú, bụ́ obodo ọzọ mara mma na Spen n’oge ochie. Ugbua otu ohere na villa, ya Puente malite na narị afọ nke XNUMX, ọ dị egwu. Ọ na-eru otu narị mita na ise n'ogologo ma, n'agbanyeghị, eweghachiri ya ọtụtụ oge. Ụlọ elu ya atọ pụtara. Abụọ na-esote mgbidi na nke atọ, hexagonal na mita iri atọ n'ịdị elu, n'etiti.
Besalú bụkwa nka akụkọ ihe mere eme ensemble. O nwekwara ihe na-adọrọ mmasị onye jewesh quarter warara n'okporo ámá ebe ị ka nwere ike ịhụ foduru nke ochie synagogue na nke ọma, ebe a na-asa ahụ́ ndị a na-eme ememe. N'akụkụ ya, ndị ebe obibi ndị mọnk nke Sant Pere E wuru ya na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na taa ọ bụ naanị ụlọ nsọ ka fọdụrụ. Na, n'otu square ahụ, ị ​​nwere ụlọ Cornellà na ochie Ụlọ ọgwụ Sant Julia, nke nwere facade sitere na XII.
La chọọchị nke San Vicente Ọ bụ ọla Romanesque sitere na narị afọ nke XNUMX na, n'èzí mgbidi, ị nwere ike ịhụ ihe foduru nke nnukwu ụlọ na ụlọ ụka San Martín. Mana anyị chọkwara ịnye gị ndụmọdụ maka ihe nwere ike ọ gaghị apụta n'ọtụtụ ntuziaka ndị njem nlegharị anya. Ebe i no na Besalú, bia Castellfullit de la Roca, Obodo mara mma nke ochie na-adịkwa obere karịa nke ahụ yiri ka ọ na-adabere na nnukwu ọnụ ọnụ ugwu.
Aínsa, na Huesca Pyrenees
Plaza Mayor nke Ainsa
Obodo ọzọ kacha mara mma na Spain bụ Aínsa, nke dị na mpaghara Sobrarbe nke ógbè Huesca. N'ịma mma akụkọ ihe mere eme, ọ na-agbakwụnye ọdịdị dị mma, ebe ọ bụ na akụkụ nke obodo ya gụnyere na ọmarịcha mma. Park Natural Park nke Sierra na Guara Canyons.
Ya mere, n'oge ochie, anyị nwere ike ịtụle Aínsa akụkọ akụkọ ahụ debere ntọala ya n'afọ 724 n'ihi ọrụ ebube nke obe ọkụ. Dị ka ya si kwuo, n'ihi ọdịdị nke ihe karịrị nke mmadụ, ndị agha Ndị Kraịst nke Garci Ximénez nwere ike imeri ndị Alakụba. Ugbua na narị afọ nke iri na asaa e wuru ụlọ nsọ nwere obe n'ime ka icheta akụkọ a nke ị ka na-ahụ taa.
Ma nnukwu akara nke Aínsa bụ ya ụlọ, wuru gburugburu narị afọ nke 1931. Ọ bụ ya bụ obodo ahụ n’ezie, ebe ọ bụ na e si na ya gbasaa mgbidi ahụ iji chebe ndị bi na gburugburu ya. Ebe ọ bụ na XNUMX ọ bụ Artistic Historical Ncheta.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị na-ahụ na obodo nke Huesca chọọchị Santa Maria, nke e wuru n'agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX na-esochi akwụkwọ ndị Romanesque. Portal nke nwere archivolts anọ na otu ọdụ ụgbọ mmiri kpuchie ya na oghere ọkara gbara agba pụtara na ịdị mfe ya, mana, karịa ihe niile, ụlọ elu, nke akụkụ pụrụ iche na Aragonese Romanesque.
Echefula ịgafe, kwa, site na ọmarịcha ya Main Square, meghere na ya arcades, ma ọ bụ ịhụ Arnal na Bielsa ụlọ, ma site na narị afọ nke XNUMX. Ma, nke ka nke, gagharịa n'okporo ụzọ ya dị warara dị ka a ga-asị na ị nọ na Middle Ages.
Frías, obodo ochie na Burgos
Echiche nke Frías, ọla mgbe ochie na mpaghara Burgos
Na ihe na-erughị narị atọ bi, ị ga-iju ịmara na obodo a dị n'ógbè nke Burgos na-ejide aha nke obodo eze nyere ya John II nke Castile na 1435. Nke a ga-enye gị echiche nke mkpa ọ nwere na Middle Ages.
Otu n'ime nnukwu akara ya bụ ihe dị egwu akwa mmiri Romanesque site na narị afọ nke XNUMX nke, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị mita na iri ise n'ogologo, so na ndị kasị ogologo na Spain. Ndozigharị emechara gbakwunyere ihe ndị Gothic dị ka ụfọdụ n'ime oghere ya, ndị a tụrụ aka. E mesịakwa bụ ụlọ elu etiti na-achọ ya mma.
Ma, ikekwe, isi ihe na-adọrọ mmasị Frías bụ ya ụlọ ochie. Ụfọdụ n'ime ha, dị ka ndị nọ na Cuenca, yiri ka ha kwụ n'elu ugwu n'okporo ụzọ na-esonyere na chọọchị nke San Vicente na nnukwu ụlọ nke Velasco. Okpueze ikpeazụ, kpomkwem, ugwu nke La Muela ma edebanyelarị ya na narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị na ụgwọ ya ugbu a sitere na XNUMXth. Ọnọdụ ya na nha ya nyere ya àgwà nchebe na-enweghị mgbagha maka mpaghara ahụ.
Banyere ụlọ ụka San Vicente Mártir na San Sebastián nke a kpọtụrụ aha n'elu, ọ na-echekwa ụfọdụ akụkụ nke ụdị Romanesque ochie ya. Ọ tara ahụhụ dị iche iche nke mere ka e wughachi ọtụtụ akụkụ ya. N'otu aka ahụ, e bugara mkpuchi ochie ya na ụlọ ihe ngosi nka nke Cloisters na New York.
Ị ga-ahụkwa ihe ncheta okpukpe ndị ọzọ na Frías dị ka ebe obibi ndị nọn nke San Francisco na Santa María de Vadillo, yana Gothic Church nke San Vítores. Na, gbasara ndị nkịtị, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na Barracks ụlọ na obí nke Salazar. Ihe a niile na-echefughị ​​nkeji iri na ise nke ndị Juu, nke dị n'okporo ámá dị ugbu a nke Convención na Virgen de la Candonga.
Albarracín, obodo ọzọ mara mma na Spain mgbe ochie
Echiche nke Albarracin
Anyị na-alaghachi kwụụrụ onwe obodo nke Aragon, kpọmkwem ka ógbè nke Teruel, ịgwa gị banyere Albarracín, onye e mere atụmatụ na ntọala ya na narị afọ nke XNUMX, mgbe otu ìgwè ndị Alakụba biri n'ebe ahụ. N'ihi nke a, o wuru nnukwu ihe alcazar nke bụ ihe ncheta akụkọ ihe mere eme nka ugbu a.
Otú ọ dị, dum obodo esetịpụ aha nke ihe mgbagwoju anya akụkọ ihe mere eme. Na oge Muslim bụkwa nke ụlọ elu ije, nke bụ akụkụ nke mgbidi nchebe nke obodo ahụ. Ihe atụ nke a bụ ụlọ elu Doña Blanca, nke dị n'otu njedebe nke ogige ahụ.
Na, na-esote nnukwu ụlọ, ị nwere katidral onye nzoputa, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na ozu nke ụlọ nsọ Romanesque ochie nke narị afọ nke XNUMX. Ọ na-ejikọta Gothic, Renaissance na Baroque styles. Ọzọkwa, n'ime, ị nwere ike ịhụ nchịkọta na-adọrọ mmasị nke Flemish tapestries.
Na-esote katidral bụ Episcopal obí, na-adọrọ mmasị baroque facade, na, na nke a na-akpọ Portal de Molina, ụlọ Julianeta, a na-ewu ewu ewu ewu. N'ikpeazụ, ndị Ụlọ Nzukọ Alaeze O sitere na narị afọ nke XNUMX.
Montefrío, Andalusian mgbe ochie
Montefrío, otu n'ime obodo kacha mara mma na Spain
Dị na n'ógbè nke Granada, Montefrío nwere nnukwu mkpa na Middle Ages nke Al Andalus. N'ezie, nnukwu ụlọ ya nwere ogige ụlọ Nasrid eze Ismail III. Nke a e wusiri ike dị na nnukwu ugwu ebe e nwekwara ụka nke obodo, wuru na narị afọ nke XNUMX site na Diego nke Siloam.
Mana ọ bụghị naanị ihe ị ga-ahụ na Montefrío. Na mgbakwunye na ịgagharị n'okporo ámá ya na ịhụ ụlọ ọcha ya, ị kwesịrị ịga leta ọmarịcha odida obodo Cerro de los Gitanos, ebe enwere ọtụtụ ebe ihe ochie na ọbụna obodo Rome na akwa mmiri. Na Barranco de los Molinos ị ga-ahụ waterfalls na, kpọmkwem, igwe igwe si n'oge Latin.
N'otu aka ahụ, ị ​​ga-aga Montefrío, nke ekwuputakwara nka akụkọ ihe mere eme ensemble, ụka nke San Sebastián na San Antonio, nke mbụ Renaissance na nke abụọ Baroque. N'aka nke ọzọ, nke incarnation bụ neoclassical. Maka akụkụ ya, ndị Ụlọ ahịa na Ụlọ ọgwụ San Juan de Dios ha sitere na narị afọ nke XNUMX na Ụlọ Nzukọ Alaeze bụ ụlọ manor sitere na narị afọ nke XNUMX.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ụfọdụ n'ime ihe kachasị mma obodo ochie nke Spain. Otú ọ dị, na-apụghị izere ezere, anyị ahapụla ọtụtụ ndị na pipeline. Naanị ikwu ole na ole, anyị ga-ehota gị Alquezar na Huesca, peratallada na Girona, Ronda na Malaga ma ọ bụ Olite na Navarre. Gaa n'ihu leta ha, ị gaghị akwa ụta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Obodo ochie nke Spain